Sida Loo Helo Nuqul Ka Kooban
Textbroker oo Bilaabay Hubinta Mawduuc Gaar ah oo Bilaash ah
Khamiis, May 13, 2010 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Qaar ka mid ah asxaabteyda waxay leeyihiin natiijooyin aad u wanaagsan oo ku saabsan iibsashada nuxurka si ay u bilaabaan degel, si ay u bixiyaan qoraalo macluumaad gaar ah, ama xitaa si ay u quudiyaan barnaamijka ghostblogging socda. Dhisidda waxyaabo aad u wanaagsan ayaa dhib noqon kara, sidaa darteed tiro adeegyo ah ayaa soo kordhay si ay uga caawiyaan shirkadaha inay dhisaan maktabadooda waxyaabaha ku jira.
Hadaad go aansato inaad baxdo cheap ama iibsato maqaallo badan oo badan, waxaad halis ugu jiri kartaa inaad iibsato waxyaabaha ku xardhan meelaha kale ee shabakadda. Textbroker waa adeeg aan qaali ahayn oo bixiya waxyaabo. Toddobaadkan waxay bilaabeen UN.COV.ER, oo ah codsi bilaash ah oo lagu xaqiijinayo in waxyaabahaagu ay yihiin kuwo gaar ah.
UNCOVER waxaa loo isticmaali karaa dhowr siyaabood oo kala duwan:
Qoraal gacanta lagu soo geliyay (nuqul & dhaji)
Websaydh dhan, oo ay ku jiraan domains iyo sub-domains
Xaqiiqdii, waad ka hubin kartaa mashruuc dhan Webka wixii nuqul ah:
Hubiyeheena Mawduucyada Gaarka ah waxay leedahay shaqo "gurguurasho" isku dhafan oo abuureysa khariidad bogga mashruucaaga oo dhan iyo waxyaabaha ku qoran. Markaas UN.CO.VER waxay si otomaatig ah isu barbardhigeysaa mid kasta oo ka mid ah qoraalladan malaayiin bog ah waxayna ku soo celineysaa warbixinno fara badan, oo ay ku jiraan boqolleyda ereyada la soo guuriyay iyo ereyada saxda ah ee la soo guuriyey. Nooca hadda jira ee autostart wuxuu ku siinayaa difaac buuxa adiga oo aan farta saarin. Marka uu Windows bilaabmo, sidoo kale UNCOV.ER, hubinta in waxyaabahaaga laga hubinayo nuqullada maalin kasta.
Haddii aad la shaqeyneyso bixiyeyaasha maaddada saddexaad, qalabkani wuxuu noqon karaa maalgashigaaga ugu fiican. Waxa ugu dambeeya ee aad ubaahantahay waa in bartaada loo aqoonsado inay tahay shabakad spam ama lagu dacweeyo daabacaadda waxyaabaha la ilaaliyo.
Tags: diidmo la'aanraadinta googlenatiijada raadintaimtixaanka bogga
Douglas Karr Thursday, May 13, 2010 Sunday, October 4, 2015
CMS Expo: Gem oo ka mid ah Shirarka Suuqgeynta iyo Teknolojiyada ee Gobollada Dhexe
Maaha Dhaleeceyntu Tirin